Mareykanka oo ka baxaya heshiiskii Turkiga ee diyaaradaha F-35 – Radio Daljir
Mareykanka oo ka baxaya heshiiskii Turkiga ee diyaaradaha F-35
Luulyo 18, 2019 8:44 b 0
Mareykanka ayaa sheegay inuu ka baxayo heshiiskii Turkiga ee barnaamijka diyaaradaha dagaalka F-35, talabaadaasi oo horay uu ugu goodiyay dowladda Turkiga inuu ka qaadi doono haddii ay isku daydo inay aqbasho gantaalka horumarsan ee Ruushka S-400 inay lasoo wareegto.
Qaybihii u horeeyey ee gantaalka S-400 ayaa loo duuliyay wadanka Turkiga, iyadoo la dhigay saldhigga ciidamada militariga ee cirka ee Turkiga Murted ee waqooyi galbeed Turkiga maalinamadii Jimcadii, kadib heshiiskii Ruushka iyo Turkiga, taasi oo ay dowladda Mareykanka ay doonaysay inay kahortagto muddo nbilooyin ah.
“Mareykanka iyo dalalka kalle ee soo saara diyaaradaha F-35 , waxaa ay qaateen go’aan ay ku joojinayaan barnaamijka diyaaraddan Turkiga inuu la wadaago iyo inay gabi ahaanba Turkiga ka saarayaan dalalka diyaaraddan iska kaashanaya soo saaristeeda” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay Pentagon.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa talaalabadan ku tilmaamay mid aan caddaalad ahayn, taasi oo dhaawici kata xiriirta labada dal.
“Waxaa ayna ugu yeeraynaa Mareykanka inuu ka laabto go’aankan uu qaatay, taasi oo dhaawac gaarsiinaysa xiriirka muhiimka ee inaga dhexeeya” ayaa lagu yiri war kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga, kadib qoraalkii Pentagonka kasoo baxay.
Turkiga ayaa ka mid ahaa dalalka iska kaashanaya soo saarista diyaaraddaha F-35.
Aqalka Wakiilada ee Mareykanka oo saxiixay qaraar ka dhan ah Sacuuiga iyo Imaaraatka
RW Khayre oo soo bandhigay xalka khilaafka Galmudug